I-NYC's Top 10 Spin Studios Izamile kwaye yavavanywa - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila I-NYC's Top 10 Spin Studios Izamile kwaye yavavanywa
Umbhali, kwi-bra yezemidlalo eblue, uthatha iklasi kwi-cyc (Ifoto: Erik Ellingson weNew York Braganca).
Njengokuba kunjalo Isini kunye neSixeko I-Stanford Blatch ine-shrinks ezintathu-enye ye-cuddles, enye yokuthetha okunzima kunye ne-ogling yenkanuko-ngoku kukho isitudiyo sokujikeleza esiza kulungela lonke uhlobo lwesidingo seNew Yorker ngesantya. Njengomntu othanda iSoulCycle, bendicinga ukuba ikamva lam lisetelwe kodwa ngenye imini, emva kokuhamba istudiyo esikhuphisanayo iPeloton Cycle, ukwazi kwandibamba le kati kwaye ndangena.
Esona sikhalazo sikhulu malunga nokujikeleza endikuvayo kubahlobo abazamayo, ngaphandle kwesantya kunye nomzamo ofunekayo, kukuba umdaniso uhamba kwezinye iiklasi akunakulandelwa. Unoko engqondweni, ecaleni kwenqanaba lobunzima kunye nesantya, kunye ne-ambience, Nazi iitudiyo eziphambili ezisithoba xa kuthelekiswa, kunye neyona nto intle kwaye imbi kakhulu.
Qaphela: Ukalisho luvela ku-1 - 4
I-Cyc Astor (Ifoto: U-Erik Ellingson weNew York Braganca).
Indawo: Ngaphakathi kukaDavid Barton Gym kwi4 Astor Indawo
Ikhanyiselwe nge-neon kunye nezibane ezimnyama, le klasi ipakisha awona mandla kunye nolonwabo. Yiba nomfanekiso ngqondweni womqeqeshi ehlaba amadramu aya kuziva ngathi intliziyo yakho ikhupha esifubeni sakho. Indlela yeCcy, eyilelwe nguKeoni Hudoba (ukuba awumazi, mjonge phezulu!) Yimizuzu engama-45 yokukhwela esekwe kubethelelwe ubunzima, ekhuthazwe yimidlalo engaphezulu kwama-20 eyahlukeneyo kubandakanya umlo wamanqindi, ibhola yevoli kunye ukuqubha. UMnu Hudoba naye ufundisa iiklasi apha, kwaye ngokulandela okuqinileyo, uyazi abafundi ngamagama kwaye uya kubakhuthaza kulo lonke uhambo. Ukuba ungangena kwenye yeeklasi zakhe, ndiyacebisa kakhulu! Uya kushiya uziva ukhuthazekile, kwaye ngathi ubukhe wazilolonga umzimba wonke.
Iinzuzo: Nandipha zonke izibonelelo zikaDavid Barton Gym kwiiyure ezimbini ngaphambi nasemva kohambo lwakho. Oku kubandakanya indawo yomthambo opheleleyo (ngaphandle kweeklasi zokomelela komzimba), iishawari, umphunga kunye ne-sauna.
Ngubani okhweleyo: Isihlwele sincinci, silungile kwaye sixubene nabakhweli abangamadoda nabasetyhini.
Isimo sezulu: 4
Ukudityaniswa kweChoreography: 1.5
Impilo yeSwerve (Ifoto: Lisa Russman).
Indawo: 30 West 18th Street
Ayilodidi labodwa. Isekwe ngokudibeneyo ziimbaleki zekholeji ezintathu, iklasi lahlulwe laba ngamaqela amathathu: bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza. Kwisithuba semizuzu engama-45 iqela ngalinye lisebenza kunye ukubetha abanye kwiiprinta ezininzi, iinduli kunye namakhefu. Ukusebenza komntu ngamnye kulinganiselwa kumanqaku eqela lakhe. Amanqaku eqela kunye nenkokeli yeqela ibonakalisiwe kwiibhodi ezimbini zamanqaku kwiklasi yonke. Nguwe kuphela okwaziyo ukubona ukusebenza kwakho komntu ngamnye kwikhonsoli yakho yebhayisikile, esi sisiqabu; ukhuphiswano alunasiphelo. Akukho choreography ekufuneka ilandelwe, kodwa kwinqanaba lesiqingatha kukho icandelo lengalo. Ndithembe, ngeli xesha uzakuthathela ingqalelo eli khefu. Ngenye yeeklasi ezinzima kakhulu, kuba uziva uphendula kwiqela lakho. Kodwa amagama akhuthazayo abizwe ngumqeqeshi aya kukunceda ukuba uqhubeke nokutyhala.
Ngubani okhweleyo: Iindidi zeembaleki zilahleka kumaqela adala ekholejini kwaye zifuna ugqatso.
Isimo sezulu: 2.5
Ukudityaniswa kweChoreography: 0
Iinzuzo: Ukuqeshisa izihlangu ngokuncomekayo kunye nebha yejusi yezitya ze-Açaí kunye nee-smoothies.
Indawo: 133 South 2nd Street (eBrooklyn)
Ngaba ufuna ukuphuma esihlalweni sakho kwaye udanise? Nantsi indawo yokwenza. Kuyo yonke iklasi yemizuzu engama-45 uyakube uphuma kwisali yomculo kwaye uhambise umzimba wakho ongasentla kulungelelwaniso. Iklasi ayisebenzisi naziphi na iintsimbi, kwaye unokukhetha ukunxiba iiteki okanye iiklip-ins (ziyafumaneka kwirente). Ngelixa iziseko ezisisiseko zilula ukulandela, kukho iiklasi zenqanaba elivulekileyo, apho abafundisi baya kunika iindlela kubagibeli abaphambili ukuba bathathe izinto ezinzima, ezikhawulezayo. Kuzo zombini iimeko, kukuzilolonga ngaphandle kwesihlalo kwaye kumnandi kakhulu kangangokuba awuzukufuna ukuba kuphele!
Ngubani okhweleyo: Isihlwele sibonakalisa abanini-mali beBrooklyn kunye neBFF, u-Ashley Lively kunye noKarla Misjan. Uninzi lwabasetyhini kwi-20 yabo.
Ukudityaniswa kweChoreography: 4
Iinzuzo: Ukuthengwa kweklasi enye yokuHamba ngebhayisikile kufana nokudlula kosuku. Unokonwabela iyoga okanye nokuba yi-TRX okanye iklasi yesekethe ye-cardio.
Flywheel (Ifoto: Audrey Amelie Rudolf).
Ezinye iiklasi zikuxelela indlela yokulinganisa ukumelana kwisikali se-1 ukuya kwi-10; eli klasi liyibonisa kwikhonsoli yebhayisikile yakho. Ikwavumelanisa nePhepha lokuSebenza kwiakhawunti yakho ekwi-Intanethi nakwi-iOS iPhone app. I-Post-class ungayilandela ukusebenza kwakho kubandakanya i-RPM's, i-torque, isantya, amandla, umgama kunye neekhalori eziqikelelweyo. Ibhayisikile apha yeyona ndiyithandayo, hayi i-metric kuphela, kodwa ngenxa yokuba yomelele ngendlela emangalisayo. Iklasi inzima, kodwa amandla kunye nomculo ziyayenzela. Unokukhetha ukuphuma okanye ukuphuma kwiibhodi zamanqaku ezibonisa ukusebenza kwakho ngokuthelekiswa neklasi. Kwicandelo lengalo kukho ibha enobunzima oya kuthi ngokuqinisekileyo uziva ngosuku olulandelayo.
Ngubani okhweleyo: UAlfa owesilisa.
Ukudityaniswa kweChoreography: 1
Iinzuzo: Ukuncoma amanzi, iziqhamo kunye nerente yezihlangu.
I-Aqua (Ifoto: Renee Ousley).
I-Aqua Studio NY
Indawo: 78 Street yaseFranklin
I-Aqua Studio NY yeyona ikhethekileyo kwiiklasi zebhayisikile, kwaye kuphela kwento efuna izihlangu zamanzi (ezikhoyo ukurenta). Iibhayisikile zitshonile echibini lokuzilolonga ukuya esinqeni phantsi kwamanzi. Abahlohli babonisa ukuphuma emanzini. Kwiklasi endiye ndayithatha umyaleli wayekhuthaza, kodwa hayi nzima. Iibhayisikile zilula, zizezentsimbi. Kuthatha imizamo embalwa yokungena kwisingqisho ukuze xa ukhawulezisa ukukhwela kwakho kugudile. Ukuhamba kweengalo kufana nokudada kwaye kuyinzuzo kule klasi. Kukho icandelo elinye apho usebenzisa iiphedi ezenza ukuba kube nzima ngakumbi. Isitudiyo sinamanqanaba amaninzi kwaye isitayile kakhulu ngeendonga zezitena ezibonakalisiweyo kunye nophahla olude. Ngokuqinisekileyo sesona sithuba siphembelela iZen.
Ngubani okhweleyo: Isihlwele sidala kancinci kunezinye ii-studio (cinga oomama baseTribeca), kunye nesini esinye.
Ukudityaniswa kweChoreography: 4 (kule meko ubugcisa buchaza intshukumo yengalo ehambelanayo)
Iinzuzo: Ngokwewebhusayithi, ukungqubana kwamanzi kunceda ekupheliseni i-cellulite. Kananjalo, ukuzilolonga kulunge kakhulu nakubani na oneentlungu ezidibeneyo okanye zemisipha-amanzi ayenza ingabinampembelelo.
IPeloton (Ifoto: Eric Hwang).
Indawo: 140 West 23rd Street
Le yeyona studio sikumgangatho ophezulu. Iklasi nganye irekhodwa kwaye isasazwa ngqo kwabo banebhayisekile yePeloton ekhaya (intle kakhulu!). Iibhayisikile zixhotyiswe ngescreen sokuchukumisa esincinci esibonisa ukunganyangeki kwakho, amandla, amandla kunye nendlela othelekisa ngayo nabanye abakhweli. Iimpawu, ewe, zilungile kwiziphumo zokulandela umkhondo. Ibhayisekile intofontofo kwaye ukurhoxa kuvakala kugudile. Ukukhwela kokubini kungena ngaphakathi nangaphandle kwesali yakho kunye necandelo elinye lengalo kunye nokukhetha ukusebenzisa ubunzima bamanye, amabini okanye amathathu. Ngelixa kunzima, iiklasi ziyonwabisa kwaye zihlala zinika i-DJ ephilayo okanye ukukhwela okunemixholo njengopende wokukhanya omnyama wesizwe, okanye i-East Coast ngokuchasene nokukhwela kwehip-hop kunxweme lwaseNtshona.
Ngubani okhweleyo: Umxube wamadoda nabasetyhini, isihlwele esidala kancinci kunezinye izitudiyo.
Inani leChoreography: 1
Iinzuzo: Ukuqeshiswa kwamanzi kunye nezihlangu kuyancomeka, kunye nokukhwela kwakho okokuqala! Ukuba ufike emva kwexesha eklasini unokukhwela kwenye yeebhayisikile zovavanyo kwaye usasaze ngqo iklasi kwindawo yokuphumla.
Rhoqo (Ifoto: Hlaziya).
Indawo: 52 East 13th Street
Abaqeqeshi benza umahluko apha; banamandla, banobuchule kwaye banolwazi (bonke baqinisekisiwe nguSchwinn). Kuhambo lonke bakhwaza amagama enkuthazo kwaye bakucebise ngokuphepha ukwenzakala.
Esi situdiyo sisandula ukuvulwa sibonelela ngeentlobo ezintathu zeklasi: Ride yangempela, RIP Ride kunye noMzimba Ride. Ndikhethe ukuKhwela uMzimba, iklasi yemizuzu engama-45 enesiqingatha semizuzu emithandathu ukuya kwesisixhenxe somzimba ophezulu kusetyenziswa ubunzima beebhegi zesanti. RIP Ride kwelinye icala iklasi yoqeqesho lwexesha lokuphumla elinemizuzu engama-60 enamacandelo amabini aphezulu emzimbeni; Ukuhamba ngenene kukuhamba ngemoto engama-45.
Ngubani okhweleyo : Mncinci, uninzi ngabasetyhini. Ikota yabakhweli ngamadoda.
Inqanaba lobunzima: 3
Isimo sezulu: 3.5
Inani leChoreography: 0
Iinzuzo: Iinketho ezimbini zobulungu: iPremiyamu ($ 279 / ngenyanga) ibandakanya ukukhwela okungasikelwanga mda, akukho khontrakthi, akukho mboniso / rhoxisa umrhumo, iindwendwe ezine zidlula ngenyanga kunye nokuqeshisa izihlangu. Isiseko ($ 259 / ngenyanga) kubandakanya ukukhwela okungasikelwanga mda, iindwendwe ezimbini ezidlulayo ngenyanga kunye nokuqeshisa izihlangu.
Torque (Ifoto: Facebook).
Ukuhamba ngebhayisikile kunye nokuQiniseka
Indawo: I-74 North 8th Street (eBrooklyn)
Le bhayisekile yokuhamba ngebhayisikile kunye nesitudiyo se-TRX sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhwela kubandakanya iklasi ye-hybrid yebhayisikile kunye ne-TRX eyilwe ngumnini uChristian Sjulsen. Iklasi endayithathayo yayihamba ngqo imizuzu engama-60. Sikhwela ngokwenyani apha eTorque, utshilo uMnu.Sjulsen, oko kuthetha ukuba abakhweli babekwe kwimephu yokwenyani kwaye asizukuyenza nantoni ngebhayisekile esingayi kuyenza kwibhayisekile ngaphandle. Ngamanye amagama, ungalindeli ukwenza i-tap backs okanye ubunzima. Isithuba sincinci, kodwa esi sisiphelo ngoba ufumana ingqalelo yomntu ngamnye. Kwiklasi endiyithathileyo, uMnu.Sjulsen weza enyusa okanye anciphisa uxhathiso ngokusekwe kwintsebenzo yomntu ngamnye.
Ngubani okhweleyo: Indawo yaseWilliamsburg eyindoda nebhinqa.
Inqanaba lobunzima: 2.5
Isimo sezulu: 3
Iinzuzo: Ukuqeshisa izihlangu ezincedisayo kunye nokuqwalaselwa komntu ngamnye.
I-Equinox (Ifoto: I-Equinox).
Zininzi iiklasi kunye nabahlohli abaza kujonga i-Equinox kwaye akukho namnye undimeleyo. Ngelixa iibhayisekile zinemetriki, azibonisi inqanaba lokumelana. Unganxiba izihlangu eziqhotyoshelweyo okanye ukhwele kwiziteki. Umculo uxhomekeke kakhulu kumhlohli. I-ambiance kunye nenqanaba lamandla alifani nelokuba uza kufumana istudiyo sebhayisikile, kodwa oko kuzokutshintsha. I-Equinox ikhupha iiklasi ezimbini zokuhamba ngebhayisikile, uPursuit: Yakha, kunye nokusukela: Ukutsha. Umxholo udidi lokuhamba ngebhayisikile olunokhuphiswano oluninzi kunye neqela kunye nemiceli mingeni. Izibalo zexesha lokwenyani ziya kuboniswa kwimizobo kunye neebhodi zabaphambili, kwaye uya kuba nakho ukulandelela inkqubela yakho.
Ngubani okhweleyo: Kuxhomekeka kwindawo, umxube olinganayo wamadoda nabasetyhini.
Inqanaba lobunzima: 2
Iinzuzo: Iiklasi zibiza ngokufanelekileyo, ngokuthe ngqo, kwaye, ewe, unazo zonke izibonelelo ze-Equinox. Umgaqo-nkqubo wokurhoxisa okuguqukayo (ungarhoxisa ukuya kwimizuzu engama-35 ngaphambi kokuqala kweklasi) ngaphandle kwesigwebo.
Umphefumlo weSoulCycle (Ifoto: Getty).
Iklasi yokuqala ye-NYC spin. Akukho zi-frills, iibhayisekile ezisisiseko, akukho zikrini okanye ukhuphiswano.Abaqeqeshi beSoulCycle abakhuthazayo babeka iiklasi zabo ngaphandle kwezinye izitudiyo zokujikeleza. Iibhayisikile zichanekile (ujika iqhosha lokuxhathisa njengoko kuyalelwe) ke ukhwela ngesantya sakho. (Nangona ndifumene ukukhwela ibhayisekile kunye neemetriki zokuchasana kwesinye isitudiyo kundincede ndayiqonda ngcono indlela yokuzihambela kwiSoulCycle.) Kuyo yonke iklasi uyabaleka, ukhwele, ujogs kunye neentshukumo zomdaniso. Kukwakho nobunzima besandla kwiithoni zethoni.
Ngubani okhweleyo: Inkolo elandelayo ye-SoulCyclists, uninzi lwabafazi, nangona abafana bevela kwimigulukudu ngeempelaveki nasemva kwexesha lomsebenzi.
Iinzuzo: Igumbi likhanyisiwe kwaye ngalo lonke ixesha lokukhwela unikwa amagama enkuthazo.
Ngaba iShipYourEnemiesGlitter iba yiNkampani yokuThutha ngokuSemthethweni?
Abaqhubi be-Uber balwa ngokuchasene nokuqhuba uNksk Crazy
Eli Lungu laMalungu-kuphela liKlabhu lifana neNdlu yeSoho yeeFashoni zangaphakathi
Iipilisi zokulahleka kobunzima kakhulu 2020
uphumelele kwaye ujin sook chang
fumana inombolo yefowuni
bukela i-rick kunye nodaka \_
I-Disney ithenge nini iimfazwe zenkwenkwezi
UJane Fonda kunye noLily Tomlin Show
Uqala nini umntu emhlabeni